Diiwaanka Cannabis • Bogga 4 ee 43 • Dawooyinka Inc.eu
Mawjadaha sharciyeynta ee dalal iyo dalal kala duwan ayaa ah tallaabo kacaan ah oo taariikhda marijuana ah. Soo helitaanka ...
Marijuana ayaa lagu dhajiyaa boostada 2021. Maxay dadka Kanada ku nool u maleeyaan?
Kanada - Tan iyo markii marijuana ay sharci ka noqotay Kanada 2018, baahida loo qabo alaabooyinka xashiishka ayaa si aad ah u kordhay. Sharciyeynta ayaa cusub ...
Kobcinta Canopy waxay soo saareysaa alaabada CBD eeyaha
Maalintii Khamiista, shirkadda marijuana ee Canada waxay ku dhawaaqday in khadkeeda Canopy Animal Health line of cannabidiol (CBD) alaabada loo bilaabay saaxiibbo afar lugood leh.
Weydii alaab-qeybiye CBD ama THC oo mid ka mid ah tixraacyada ugu muhiimsan ee alaabooyinka ay tahay isticmaalka dhibaatooyinka hurdo la'aanta
cannabis, CBD, Caafimaadka, Wararka
David Beckham wuxuu taageeraa shirkad daryeelka maqaarka (Alaabta Gacanta) iibisa alaabada daryeelka ee xashiishku ku jiro. Shirkadda ayaa qorsheyneysa inay suuqa ...
Tikniyoolajiyada aqoonsiga hidaha ee CGF waxay horumarin kartaa dhirta waxayna ilaalin kartaa hantida aqooneed
Shirkadda Israel ee xashiishadda caafimaadka ee Tikun-Olam Cannbit ayaa sheegtay inay soo saartay Cannabis Generic Fingerprinting (CGF technology) - a ...
In kasta oo adduunku wali ku mashquulsan yahay cudurka loo yaqaan 'Coronavirus', xarun lagu iibiyo xashiishadda Michigan ayaa qaadatay siyaasad aan caadi ahayn oo lagu doonayo in lagu ...
BNN Bloomberg ayaa toddobaadkan shaacisay in hal bilyan oo garaam oo dheriga sharciga ah ee Kanada aan lagu iibin bakhaarrada waddanka oo dhan ...
Cilmi-baaris ayaa lagu ogaanayaa suurtagalnimada isku-darka xashiishadda sida antibiyootikada
Cilmi-baaris cusub, oo laga sameeyay Jaamacadda Queensland, Australia, ayaa muujisay in xashiishad ka kooban ay u adeegsan karto antibiyootiko iyo ...
Cyrille Fijnaut (74) wuxuu ku doodayaa buugiisa cusub sharciyeynta xashiishka ee EU-da oo dhan. Qof kastaa wuu ogyahay in ...
Wax soo saarka CBD waxay la wareegeen suuqa dadkuna waxay ogaanayaan faa'iidooyinkooda badan, laakiin maahan in qof walbaa taageere u yahay ...
Jay-Z wuxuu $ 10 milyan ku maalgelinayaa sanduuqa xashiishadda ee dadka laga tirada badan yahay ee ganacsiga xashiishka
Jay-Z wuxuu $ 10 milyan u uruurinayaa sanduuq loo qoondeeyay in lagu maalgeliyo ganacsiyada xashiishadda leh ...